အဘယ်ကြောင့် အဲဟ်လေ့စွန္နသ် (စွန်နီ) နှင့် ဝဟာဘီများ ရှီအာ များကို ရာဖွေဇီ ဟု ခေါ် ကြ ပါသနည်း ? ရာဖွေဇီ ၏ အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပေးပါ
November 10, 2016 - 5:38 PM
News Code : 791075
ရာဖွေဇီ ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ စွန့်လွှတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အစပထမပိုင်းတွင် မိမိခေတ်ကာလ၏ အစိုးရ (တရားသည့်နည်းနှင့်တက်လာသည့် အစိုးရဖြစ်စေ ၊ မတရား နှင့် နည်းနှင့်တက်လာသည့် အစိုးရဖြစ်စေ) ကို ဆန့်ကျင်သူကို ခေါ်ဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ ရှီအာများ အနေဖြင့် အချို့ ခလီဖွာ ကို လက်မခံဘဲ စွန့်လွှတ် ခဲ့သည့် အတွက် ၎င်းတို့ကို ရာဖွေဇီ ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အဓိက လှုံ့ဆော်ပြီး သုံးစွဲရာတွင် ရှီအာများ ကို ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင် ရှုတ်ချ သည့် အနေဖြင့် ၎င်း သာသနာ မရှိသူ (အစ္စလာမ်မဟုတ်သူ) အဖြစ်၎င်း သုံးနေကြပြီး ရှီအာများ ကို သတ်ဖြတ် ၊ရက်စက် ညှဉ်းပန်း ရန်အတွက် အကြောင်းခံတစ်ခု အဖြစ်သုံးနေကြပါတယ်။ အနည်း ငယ်အတိအကျ လေ့လာ နိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြချက်များ ကိုလေ့လာ နိုင်ပါ တယ်။
ရာဖွေဇွာဟ် «رافضه» ဆိုသည်မှာ «رفض» ရာဖွာဇွာ ဆိုသည့် ပုဒ်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ် ကတော့ စွန့်ပစ် ၊စွန့်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြောင့် مقابيسဆိုသည့် အဘိဓာန် တွင်လာရှိသည်မှာ (رفضتُ الشيء أي تركته)အဓိပ္ပာယ် ပြောရလျှင် ထိုအရာကို ကျနော်အနေဖြင့် စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ် ဟု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အဘိဓာန် အနေဖြင့် အကြင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိ၏ ခေါင်းဆောင် များ နှင့် အာဏာရှင်များ ကို ဆန့််ကျင်သူ ကို လည်းခေါ်ဆိုကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
محمد بن فارس، معجم مقایيس اللغة، ذيل كلمه رفض.
ဤ အဓိပ္ပာယ် အရဆိုလျှင် အရင်စစ်အစိုးရ နှင့် လက်ရှိ NLD အစိုးရ ကို လက်မခံသည့် စွန်နီ မွတ်စလင်မ် ၊ဝဟာဘီများ သည်လည်း ရာဖွေဇီများ ဖြစ်နေပါပြီး။
ဤစကားလုံးကို အစပထမပိုင်းတွင် အဘိဓာန် အဓိပ္ပာယ် အတိုင်း သုံးစွဲ ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိခေတ်ကာလ၏ အစိုးရ ၊အာဏာရှင် တရားတဲ့နည်းနှင့် တက်လာလာ ၊မတက်လာလာ ကို ဆန့်ကျင်သူ ၊လက်မခံသူ ကို ရာဖွေဇီ ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ မိုအာဝေယဟ် အနေဖြင့် ဤစကားလုံးအား မရ်ဝန် နှင့် အချို့ သူများ ၎င်းထံ ဂျမလ်စစ်ပွဲ အပြီး လာခဲ့ကြသူများ ကို ခေါ်ဝေါ် သမုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း (မိုအာဝေယဟ်) အနေဖြင့် မိမိ၏ စာတစ်စောင်တွင် အမရ်ရေအာစ် ကို ရေးခဲ့ပါတယ်။
ရေးသားခဲ့သည့် စာသားမှာ «وقد سقط الينا مروان بن الحكم في رافضة اهل البصرة»ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ မရ်ဝန် နှင့်အနေဖြင့် ရာဖေဇီ အုပ်စု ဗဆွာရာသားများ ( ခလီဖွာ အလီ (အ.စ) အား ဆန့်ကျင်သူများအုပ်စု) ကျွန်ုပ်ထံရောက်လာ ပါတယ်ဟု ဖြစ်ပါတယ်။
نصر بن مزاحم: وقعه صفين (مؤسسة العربية الحديثه) ص 24 و شبيه اين عبارت در: انساب الاشراف: بلاذري (دارالفكر، بيروت) ج 3، ص 72 .
နောက်ပိုင်းတွင် အငြိုးကြီး (ရှီအာကို မုန်းသည့်သူတိုင်း ) ရှီအာဆိုတာ အစ္စလာမ်သာသနာ အပြင် ရောက်သွားသည်ဆိုသည့် စွဲချက် ၊ခလီဖွာ များ ကို လက်မခံသည့် အကြောင်းပြချက် ဖြင့် ရှီအာ မွတ်စလင်မ် များကို ရာဖွေဇီ ဟု သုံးလာ ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဤ စကားလုံးကို ရှီအာ မွတ်စလင်မ် များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး နှစ်မျိုး နှစ်စား အဖြစ်အသုံးပြု ကြပါတယ်။
၁။ တစ်ခါတစ်ရံ ရှီအာ မွတ်စလင်မ် ဖေရ်ကာ အားလုံးကို ပြောဆိုသုံးစွဲကြပါတယ်။
اسفراييني: التبصير في الدين، تحقيق از كمال يوسف الحوت (عالم الكتب، چاپ اول، 1403 هـ ) ص 27 .
၂။ တစ်ခါတစ်ရံ ရှီအာ ဖေရ်ကာများ အထဲမှ အေမာမ်မီယာ (၁၂ပါးအေမာမ် ကိုလက်ခံ သူများ ) အတွက်သာ သီးသန့် သုံးစွဲပါတယ်။ (ယနေ့ မြန်မာပြည်မှ စွန်နီ (သို့) သွာရီကာ ဂိုဏ်း အမည်ခံ မနူးမနပ်များ သုံးနေသလိုပေါ့။)
အဗူဟစန် အရ်ှအရီ အနေဖြင့် ရှီအာ အေမာမ်မီယာ ကို ရာဖွေဇီ ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့ ပါတယ်။
ابوالحسن اشعري: مقالات الاسلاميين (مكتبة العصرية) ج 1، ص 88
မည်သို့ ဆိုစေ သမိုင်း အထောက်အထားများအရ အချို့ (အစွန်းရောက်၊အငြိုးကြီး ) စွန်နီများအနေဖြင့် ရှီအာများကို အားနည်းအောင် ၊ ရှီအာ ကို ဝိုင်းပယ်အောင်ဆိုသည့် အောက်တန်းကျ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ရှီအာများကို ရာဖွေဇီ ဟု ခေါ်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။ (မြန်မာလို့ရှင်းအောင်ပြောရလျှင် ကုလားဆိုတဲ့ စကားကို အခုခေတ် အစ္စလာမ်မုန်းတီး သူများ ဆုံးစွဲနေသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါတယ်။ )
အဘယ်ကြောင့် အဲဟ်လေ့စွန္နသ် (စွန်နီ) နှင့် ဝဟာဘီများ ရှီအာ များကို ရာဖွေဇီ ဟု ခေါ် ကြ ပါသနည်း ? ရာဖွေဇီ ၏ အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပေးပါ ? (၂) ကို ရလာဒ် ၊အနှစ်ချုပ် ထွက်လာရန် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ ။